Landela kwiSabelo seNtengiso seKhangeli kwiColts.com | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 27, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa ndibhalayo iposti kwi Ukwabelana ngeNtengiso yeBrowser, uninzi lwengxelo eposini yayikukuba ndingazithembi iinkcukacha-manani ezikwiW3Schools.com. Ndiyithandabuzile le ngxelo… kutheni emhlabeni amanani-manani angahluka kakhulu kwiwebhusayithi kwiwebhusayithi?
Ewe, enkosi kubaxhasi… Ndifumanise ukuba ibalulekile! Ndilahle umhlobo olungileyo uPat Coyle i-imeyile kwaye ndabuza ukuba angakuvuyela na ukwabelana ngeenkcukacha-manani ezithile IColt.com. Ukucinga kwam yayikukuba ngumdlali wezemidlalo okhutheleyo usenokuba wahluke kakhulu emntwini otyelele indawo malunga neTekhnoloji yeWebhu kwaye uya kuba liqela elifanelekileyo lokuthelekisa. Kwaye kunjalo! Ezi nkcukacha-manani zilandelayo zisekwe kwiindwendwe ezingama-870,000 zokugqibela eColts.com:
Ukwabelana ngeNtengiso yeBrowser kwiColts.com:
Isabelo seMarike yeBrawuza yabatyeleli- Ubume:
Ngubani owaziyo?! Ndiza kunika ingqalelo engakumbi kwizibalo ezizimeleyo zesabelo esivela ngoku ukuza kuthi ga ngoku xa uzijonga kunokuba ndicinge kwisabelo sentengiso siphela. Kwinqaku elisecaleni, Nazi izibalo zebhlog yam kwinyanga ephelileyo. Andikaze ndibajonge ngaphambili, kodwa uya kubona umohluko!
Izibalo zesikhangeli kubakhenkethi bam:
VZ Navigator… Ndine GPS… Ngoku yintoni?!
Agasti 28, 2007 kwi-8: 29 AM
Ndiyivile le nto, kwaye ngelixa isenza ingqiqo, umntu unokuthi yonke indawo izakuvelisa isikhangeli esahlukileyo ngenxa yabaphulaphuli ababodwa. Ndingathanda ukucinga ukuba ukuba uthathe zonke izibalo kwezona webhusayithi zidumileyo wazidibanisa, uya kufumana oko banako. (Khange ndijonge kumthombo wedatha wam).
Ndiyazi ukuba iibhlog ezininzi zilungiselelwe kwiFirefox, kodwa iiColts zifumana uninzi ngokubanzi.
Iseti yedatha entle, enkosi ngokwabelana. Iigrafu ezintle, nazo 🙂
Imifanekiso eqingqiweyo ye-LA
Agasti 29, 2007 kwi-12: 58 AM
Kubonakala kum ukuba abantu abafunda iiblogi bathanda ukusebenzisa iFirefox ngakumbi. Andizange ndisebenzise i-Internet Explorer kangako. Ndiqinisekile ukuba uluntu ngokubanzi luyisebenzisa rhoqo.
Agasti 29, 2007 kwi-6: 00 AM
Kunika umdla ukuba oko kuya kuba… kodwa idatha inika ubungqina bokuba uchanekile!
Agasti 30, 2007 kwi-2: 36 AM
Ndonwabile ukuba uphinde waphinda oku ngezibalo ezahlukeneyo kwii-W3Schools, bendizakubhala uluvo oluhlabayo kweso sithuba!
Inqaku elivezwe ngokwenene apha kukuba kuphela kwezibalo ezibalulekileyo zeziza oziqwalaselayo ngelo xesha. Ukuba umzekelo indawo yakho okanye indawo yeeColts ayisebenzi kwi-IE, iiColts ziya kuba neengxaki ezininzi kunawe. Indawo nganye kufuneka isebenze nabaphulaphuli bayo kunye neebrawuza abazisebenzisayo.
Njengomlinganiso ngokubanzi wesabelo sesikhangeli okwangoku, ukubona nje ukuba iMozilla iqhuba njani, ndingathanda ukubona izibalo zesikhangeli sikaGoogle!
I-PC yezixhobo zeHardware
Agasti 30, 2007 ngo-8: 37 PM
Iikhompyuter zegek ngokuqinisekileyo zisebenzisa iFirefox ngaphezulu kwe-shmoe ephakathi. Ndizisebenzisa zombini. Ndisebenzisa kuphela i-IE ngoku kuba ndiyiqhelile, kodwa ndihamba kancinci ukuya kwiFirefox. Ngokukodwa mva nje emva kokubethwa yi-malware kabini kwinyanga enye ngelixa usebenzisa i-IE.
Sep 10, 2007 kwi-9: 58 AM
Enkosi ngale posi! Konke endikubonileyo ukuza kuthi ga ngoku ngamanani avela kwiitekhnoloji ezinobunzima besiza, yiyo loo nto abasebenzisi kusenokwenzeka ukuba banesisombululo esiphezulu kunye nesinye isikhangeli ngaphandle kwe-IE. Ndingathanda ukubona ukuba isisombululo sescreen kwi-colts.com yintoni…